Komaandi poostiin dhimma keenya keessa akka hin seennee dura dhaabbanne: Baratoota Yunvarsiitii Haramayaa - OMN
Komaandi poostiin dhimma keenya keessa akka hin seennee dura dhaabbanne: Baratoota Yunvarsiitii Haramayaa
(Haramayaa , Oromiyaa, Waxabajjii 18, 2017) – Wal dorgommiin Gumii Aada fi Artii Afaan Oromootin Yunvarsiitii Haramaayaa keessatti geggeefame milkiin xumurame.
Sagantaa wal dorgommii goota aartii afaan Oromoo wal madaalchisuu je’u barattoonni Oromoo Yunvarsiitii Haramaayaa qopheessan kana irratti barattoonni Oromoo dhibbootan lakkaawaman, keessummoonni fi sabboontonni Oromoo heddumminaan akka argaman keessa beekaan tokko OMN hime.
Dorgomtoonni barattoota irraa tahan sirboota nama hawwatan, walaloo, daraamaalee fi shubbisa gara garaa dhiheessun sirnichi haala addaatin akka miidhage taasisee himamee jira. Akka beekann kun itti dabaluun, barattoonni Oromoo Yunivarsitii Haramaayaa sirboottan warraaysaa gara garaa sodaa tokko malee sirbuun diina naasisaniiru jedhe.
Qophii dorgommii kanaa erga xumuratanii turuu isaanii kan dubbatu namni kun sababaan turuu keenyatis humnoonni command post qpohii kana akka hin dhiheessine nu dhoowwaa turanii je’a.
Kana male sirboottan, walaloo fi diraamaalee qopheeffattan nuutu isiniif gulaala je’anii nu doorsisaa turanis dura dhaabbannoo dhimma keenya keessa akka isaan hin seenne goone milkaawuu dandeenyee je’a barataan kun.
Tahus barattoonni Oromoo 3 dhimma kanaa qabatee humnoota command Postiin akka hidhaman maqaa barattoota hidhamanii tarrisuun akkana je’a.
Gara biraatin Ummanni naanichaa fi sabboontonni Oromoo hedduunis kallattiilee adda addaatin akka isaan gargaaranii fi cinaa dhaabbatan dubbata barataan yaada nuuf laate kun. Dabaluunis yaamicha isaanii kabajanii moora fi galmi Yunivarsitii Haramaayaa Oromoon guutamuu nutti hime.
Barattoota haala miidhagina qabuu fi nama hawwatuun dorgommii kana irraa qooda fudhatanii fi tokkoffaa bahaniif badhaasni addaa fi waraqaan ragaa laatameefii jira. Xumura irrattis sagantaan kun akkuma eebba manguddootin jalqabe eebban xumurame.
OMN: Haala 1991 fi Ammaa Ilaalchisee turtii Obbo Maatiyaas Guddinaa wajjin (LIVE) Caamsaa 26, 2018
OMN: IMALA AARTII, Ayyuub Abuubakar Eenyu? (Caamsaa 26, 2018)
OMN: Weera Baatee, Wallo ( Caamsaa 26, 2018)
OMN: Oduu ( max 17, 2017)
Komaandi poostiin dhimma keenya keessa akka hin seenne dura dhaabbanne: Baratoota Yunvarsiitii Haramayaa
OMN: Oduu Caamsaa 26, 2018
Oduu amma nu gahe
OMN: ODUU Amma Nu Gahee (Caamsaa 25, 2018)
OMN: Xiinxala Haala yeroo Irratti (LIVE) Caamsaa 25, 2018
OMN: ODUU (Caamsaa 25, 2018)
OMN: WEERARA DAANGAA OROMIYAA FI DEEGGARSA LAMMIILEE (caamsaa 25, 2018)
OMN: Oduu amma nu gahe (Lola Walloo) cammasaa 24, 2018)
Copyright © 2015 Oromia Media Network